सूचना प्रविधि Archives - Page 31 of 31 - A complete Nepali news portal based on news & views
अध्ययनमा इन्टरनेटको उपयोग अत्यधिक
१० असार २०७४, शनिबार १४:४५ June 24, 2017 Nonstop Khabar
सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानवको दैनिक जीवनमा परिर्वतनहरू आइरहेका छन् । यस्तो परिवर्तनलाई विद्यार्थी वर्गले अझ बढी सदुपयोग गर्न सक्छन् । अध्ययन वा अन्य कुनै पनि काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गरेर अझ बढी ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग सही तरिकाले गर्दा हामीले चाहेको हरेक कुरा सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ । विद्यार्थीले अध्ययन गर्न […]
यसरी सजिलै स्मरण गर्न सकिन्छ लामा लामा अंक
१० असार २०७४, शनिबार १४:३४ June 24, 2017 Nonstop Khabar
कहिलेकाहीँ आफ्नै सवारीसाधनको नम्बर पनि याद हुँदैन । त्यस्तै, साथीभाइका मोबाइल नम्बर पनि फोनमा सेभ नगरी याद आउँदै आउँदैन । अझ लामो नम्बरको क्रम देख्दा त याद गर्न असम्भवझैँ लाग्छ । यसरी अंक सम्झन गाह्रो हुने समस्या धेरैलाई हुन्छ । तर, केही सजिलो उपाय अपनाएर धेरै नम्बर पनि लामो समयसम्म सम्झन सकिन्छ । नम्बर सम्झने […]
कम्प्युटर फास्ट बनाउने यी अचूक उपाय
१० असार २०७४, शनिबार १४:२८ June 24, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । घर तथा कार्यालयका अधिकांश कम्प्युटरमा कहिलेकाहीँ स–साना कमजोरीले पनि समस्या आइरहन्छन् । कम्प्युटरमा काम गर्दै गर्दा गति कम हुने तथा भाइरसले सताउने समस्या अधिकांशले भोगिरहेका हुन्छन् । भर्खरै राम्रोसँग चलिरहेको कम्प्युटर आफैँ स्लो हुन पुग्छ । धेरै समय पर्खंदा पनि कम्प्युटर ओपन हुँदैन । काम गर्दै गर्दा कम्प्युटर हयाङ हुनेजस्ता समस्याहरू नियमित हुन्छन् […]
माेटरसाइकल चलाउँदा थाहा पाउनैपर्ने केही कुराहरु
१० असार २०७४, शनिबार १४:२१ June 24, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । दुईपांग्रे सवारी चलाउँदा कुनै पनि समय र स्थानमा दुर्घटना हुन सक्छ । आफ्नो या अरूको गल्तीका कारण पनि मोटरसाइकलचालकहरू दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले मोटरसाइकल चलाउँदा चालकले सुरक्षाका विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुँदैन । सडकमा दुईपांग्रे चलाउँदै गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सुरक्षित उपायबारे कायस्थ मोटर्सका सञ्चालक नसिब कायस्थका सुझाब यस्ता छन् : गुणस्तरीय […]
के माेवार्इलमा भाइरस लागेर हैरान हुनुहुन्छ ? समाधानका यी पाँच उपाय
१० असार २०७४, शनिबार १४:०१ June 24, 2017 Nonstop Khabar
एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम (ओएस) भएको स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्दो छ । तर, यस्तो फोनमा भाइरसले कुनै न कुनै तरिकाले आक्रमण गर्न सक्छ । भाइरसले स्मार्टफोनको डाटा नै बिगारिदिन सक्छ । त्यसैले, यस्ता भाइरसलाई हटाउनैपर्छ । तर, कसरी ? कम्प्युटर टेक्निसियन युवराज भट्टराईले टिप्स दिएका छन् : स्टेप १ : सेफ मोड रिबुट पहिले आफ्नो […]